ကျီးကို ဘုတ်ကရိုသေ ဘုတ်ကို ကျီးက ရိုသေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကျီးကို ဘုတ်ကရိုသေ ဘုတ်ကို ကျီးက ရိုသေ
ကျီးကို ဘုတ်ကရိုသေ ဘုတ်ကို ကျီးက ရိုသေ
Posted by pioneer youth on Sep 11, 2012 in Computers & Technology, Myanmar Gazette | 23 comments
မနေညက ဂဇက်ထဲ ဝင်တော့ ဒါတွေတွေလိုက်ရချိန်မှာ တိုက်ခံရပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် Cyber Army ဆိုပြီး သိလိုက်ရချိန်မှာ ကျွန်ရေးသားခဲ့သော ပိုစ်အားလှောင်ပြာင်ခဲ့သူများကို မျက်လုံးထဲ သွားမြင်နေမိပါတယ် ဂေဇက်ထဲမှာ လာဖတ်သူများ မှာ ဘာမှတ်ချက်မှမရေးသော်လည်း ပညာရှင်တွေအများကြီး ရှိနေပါသည် ဂဇက်ကို ပုံသဏ္ဃန် အမျိုးနဲ့ တိုက်ခိုက်နေကြသည်မှာ တကြိမ်မက တော့ပါ ယခု အခါတွင် နာမည်နဲ့ တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာ ပထဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေပေမည်..။Kai ထက်ပင်ဂေဇက်ကို crazy ဖြစ်ပြီး တရေးနိုးတိုင်းထကြည့်မိသူ ဖြစ်သောကြောင့် ဘာဖြစ်ခဲ့ သည်ကို မှတ်တမ်းမတင်ထားသော်လည်း ယခုအခါတွင်မှတ်တမ်း တင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်…။ကဲ သင်ကိုဆိုက်ဘာတပ်မတော်မှ လိုရှိသည်ဟု ဆောင်းပါးလေး ရေးချိန်တွင် လူအချိုသာ ထောက်ခံအားပေးပြီး လူတချို့ကမူ ပျက်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ် ဆိုက်ဘာ ဥပဒေကို အရေကြိုသောက်ထားသယောင်ယောင် ဆိုက်အယ်ဒီတာ မဟုတ်သူများက ကျွန်တော်ကို ချိမ်းခြောက်စကားပြောခံရပါသေးတယ် .အရင်းမြစ်ကို ဆန်းစစ်ကြည်သော် (၁) သတ်မှတ်ထားသော စည်း ကမ်းများကို လိုက်နာချင်းမရှိချင်း ။လွပ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသော်လည်း တဖက်သတ်ပြောဆိုမိတတ်သော လူအချိုးကြောင့်ပင် အယ်ဒီတာအားမုန်းတီးနေချင်း၊ ဥပမာ ပြောရ၇င် ကန့်သတ်ထားသော ပိုစ့်များအား အယ်ဒီတာကိုတိုင်ပင် မလိုက်နာဘဲပြနာကြီး မှ ပိတ်စို့ချင်း ၊အစရှသည်များက ဆိုက်အား အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဟု သုံးသပ်မိပါတယ် အမှန်တရားပြောဆိုသောကြောင်ဆဲ လျှင်လဲ ငယ်သူများ အကုသိုလ်ယူပြီး ကြီးသူများကို သာဓုခေါ်ပေးပါမည်..။လူအခွင့်ရေးရှိသော တိုင်းပြည်များတွင်လည်း လူမျိုးအလွှာ အလိုက် ပြောဆိုဆက်ဆံရေးသား ကြသည်ကို တွေ မြင်နေ၇ပါ သည် သိုသော စည်း နှင့် အညီ ရှိကြပါ မရှိပါက မရှိသလိုဖြစ်နေကြ မှာမလွဲပါ..။ဒီမိုကရေ စီဟုပြောပြီး တာရိုးပေါ်တွင်ဆေး ရိုးလှမ်းသကဲ့များဖြစ်နေလေမလားလို့…..။ ကျီးကို ဘုတ်ကရိုသေ ဘုတ်ကို ကျီးက ရိုသေမှသာ…….
ကျွန်တော် တယောက်ထဲအမြင်သာ ဖြစ်ပါသည်..။
Htoo thin ရေ မှန်လိုက်တာဗျာ … ကိုယ်မယုံကြည်ဘူး ဆိုရင်တောင် မှ သူတို့အဖွဲ့တွေကို အပုပ်ချတာဟာ ကိုယ့်ပြသနာ ကိုယ်ခေါ်တာနဲ့အတူတူဘဲ … အခုကိစ္စကတော့ BD တွေလုပ်သွားတာ ပိရိ လွန်းတယ်
ရွာထဲမှ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် ကိုကို မမ ညီငယ် ညီမ တူ တူမ နှင့် အဖိုး အဖွား များခင်ဗျာ Hacker အကြောင်းပိုစ့်များ၊ ဆွေးနွေးမှု့ကွန်မန့်များကို မရေးကြဘဲ အခြားမိမိနှစ်သက်ရာရေးခြင်းဖြင့် ရွာသာယာရေးကို ကူညီပေးစေလိုကြောင်း တောင်းပန်လိုက်ပါသည်။ ထို Hacker ကိစ္စများကို သည်မျှသာ ရပ်နားလိုက်ကြပါတော့ခင်ဗျာ။ ( ဤကား ရွာ၏အလိုတည်း )
မသိလို့ တခုလောက် မေးပါရစေခင်ဗျ။ ကျနော် သိပ်မရှင်းတဲ့ စာသားလေးမို့ပါ။ “လွတ်လပ်စွာ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသော်လည်း တဖက်သတ် ပြောဆိုမိတတ်သော လူအချို့ကြောင့်ပင် အယ်ဒီတာအား မုန်းတီးနေခြင်း” အဲဒီစာသားလေး သိပ်နားမလည်ဘူး ခင်ဗျ။ တဖက်သတ်ဆိုတော့ မဟုတ်မမှန် မတရားပြောတာ များဖြစ်နေမလားလို့ပါ။ ဘယ်လိုလူက ဘယ်လိုနေရာမှာ အထောက်အထား မရှိပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ အယ်ဒီတာကြီးကို ပြောဆိုသလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ဥပမာလေးပေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြောသူရဲ့ သတ္တိကလည်း မသေးဘူး ထင်လို့ပါ။ အယ်ဒီတာကြီးက ကိုယ်တိုင် ပညာပြည့်တဲ့အပြင် သူ့ကို ထိရင်လည်း သူ့ဘက်က ဝင်လာမယ့် ဘက်တော်သားတွေက မနည်းဘူး မဟုတ်လား။
ခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ဘူး ဂဇက် ဟက်ကာအကြောင်းမရေးရဘူးမသတ်မှတ်ထားဘူး ဘာလဲ ခင်ဗျားက ဂဇက်ကို နောက်မှရောက်လာတဲ့လူထင်နေလို့ဒီစကားပြောနေတာလား ခင်ဗျားတို့မရှိခင်ထဲက စာမျက်နှာ ၁ထဲက နေရှိနေတာ …..ခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာ ဟက်ခံနေရတုန်းက ဘာတွေခင်ဗျားလုပ်ခဲ့လဲ မဟက်ခင်ရရော ဘာတွေ လုပ်ပေးခဲ့လဲ ပြောပါဦး…။တော်လိုက်တော့ ဒီမှာ …ဘဲ..။
San Hla Gyi says
“လွတ်လပ်စွာ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသော်လည်း တဖက်သတ် ပြောဆိုမိတတ်သော လူအချို့ကြောင့်ပင် အယ်ဒီတာအား မုန်းတီးနေခြင်း” အဲဒီစာသားလေး သိပ်နားမလည်ဘူး ခင်ဗျ။ တဖက်သတ်ဆိုတော့ မဟုတ်မမှန် မတရားပြောတာ များဖြစ်နေမလားလို့ပါ။ ဘယ်လိုလူက ဘယ်လိုနေရာမှာ အထောက်အထား မရှိပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ အယ်ဒီတာကြီးကို ပြောဆိုသလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ဥပမာလေးပေးပါ။
စံလှကြီးရေ သိပ်ပြီးမဖါးနဲ့ စာတွေကို သေခြာဖတ်သိလား ခင်ဗျား စာဖတ်အားနည်းနေသေးတယ်
ခင်ဗျား အယ်ဒီတာကို ကြိုက်နေတာလား ခင်ဗျားဂေးလား သူကိုထိရင် နာနေတာလားအမှတ်ပြောတာ သိလား ဂဇက် က အယ်ဒီတာက ရိုဟင်ဂျာအယ်ဒီတာဆိုတာ ပိုဒ်တခုမှာရေထားတာ ခင်ဗျားမှ မဖတ်တာ စာဖါး အကျင့်တွေ ဖြောက်လိုက်ပါ ဗျာ ရိုးနေပြီ
ဒီ အကွတ်တွေ…..ဟက်ကာတွေကို ခင်ဗျားဒီလိုပြောပါလားဟက်နေတုန်းက ….ခင်ဗျား လာပြီး လှော်မနေနဲ့ သူဘက်က ဘက်တော်သားတွေ အများကြီးဘဲဆိုတာ ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို ခွဲထုတ်လိုက်တာ ဂေဇက်က နေ ခင်ဗျားတို့က အုပ်စုဖွဲ့ တတ်တဲ့ အကျင့် က နေဝင်းမြည်းတွေ အောက်ဆွဲ အဆင့်ဘဲ ရှိပါတယ် အေးနေဝင်းတို့ ကျော်နေဝင်းတို့ရှိနေချိန်ခင်ဗျားဖါး၇င် တော့ ပါမစ်လေးဘာလေးရမှာပေါ့ အခုဖါးရင်……..?ခင်ဗျားသိထားဖို့က ရဲရဲရင့်ရင်တယ်ဆိုတာ ရိုးသားမှူ့လို့တယ်ဗျ….ခင်ဗျားသိလား……
အော်မေ့လို့ Htoo Thin ဆိုတဲ့ကောင်
မင်းစာတွေကို သေချာဖတ်လို့လား မသိဘူး။ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံတွေ တော်တော်မှားနေတယ်။ စာရိုက်တာ မှားတယ် ပြောရအောင်လည်း နည်းနည်းပါးပါး မဟုတ်ဘူး။ “သေခြာဖတ်” အမှတ်ပြောတာလား အမှန်ပြောတာလား ဟေ့ကောင်။ ပို့စ်တခုလား ပိုဒ်တခုလား။ ဒီအကွက်တွေလား ဒီအကွတ်တွေလား။ မင်းစာတွေကို သေချာဖတ်လို့လား မသိဘူး။ အသုံးလုံး ပြန်သင်ခိုင်းရမယ်။ တော်တော်များများကို မှားနေတယ်။
ဒါနဲ့များ မင်းက စာမျက်နှာ ၁ကတည်းက ရေးလာတယ် ဟုတ်လား။ သွားပြီး ပါးစပ်ကို အက်ဆစ်နဲ့ ပလုပ်ကျင်းလားခဲ့။ စိတ်ထိခက်ယက် သွားပြီ ဟီး ဟီး။
အမှန်ရေးလို့ရွာထဲမနေရဘူးဆိုတာ အခုမှ မှန်နေပြီလား Kai ရေ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ဟေ့ကောင် Htoo Thin ဆိုတဲ့ကောင်
အယ်ဒီတာကို ဖားနေတာက မင်းကွ။ အခု မင်းပြောနေတဲ့ စကားကပဲ မင်းအချစ်တော်ကြီးကို တိုင်တည်ပြီး ပြောနေတာလေ။ မဆီမဆိုင် နေဝင်းတွေ ဘာတွေ ထည့်မပြောနဲ့ ဟေ့ကောင်ရေ။ ဘာမှကို မဆိုင်ဘူး။ မင်းရေးတဲ့ စာဖတ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ စာလေးတွေလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေး ရေးပါ။ ငါတော့ သိပ်မတွေ့သေးဘူး။ ဒါပဲ။
မင်းစပြီးရိုင်းတဲ့အတွက် ငါလည်း ဒီလိုပဲ တုန့်ပြန်လိုက်တယ်။ မင်းအဆင့်က ဒီလောက်ပဲရှိလို့ကွ။
ရွာထဲကို ဂေါက်သီးတွေ…အဲလေ….ဂျပန်တွေ ၀င်လာပြီ…..လစ်မှ……
ဒက်ဂလောက် …ဒက်ဂလောက်…. (C/D2ချစ်တောမောင်)
မန်းတလေး ဂေဇက် က ရှိသမျှ ရွာသူားအပေါင်းတို့ နားထောင်ကြဘာ
ထူးတင် ပြောတာ သေချာ နားထောင်ကြနော်
ဟုတ်တယ် ကိုပေရေ။ ကျနော်လည်း အပြန်အလှန် မပြောရတာကြာလို့ နည်းနည်း ပျင်းနေတာ။ ပြောရရင် ဒီအကွတ်တွေ အဲ ယောင်လို့ ဒီအကွက်တွေက ကျုပ်လုပ်နေကျပါ။ ကိုပေအနေနဲ့ ကျပ်ကို အဲလေ ကျုပ်ကို နားလည်ချင်ရင် စာတွေကို သေခြာဖတ်။ စာသေချာ မဖတ်ရင် မြန်မာစာရေးရင် အခက်အခဲ ရှိနိုင်တယ်။ ကျပ်အနေနဲ့ အဲလေ ကျုပ်အနေနဲ့ အမှတ်ပြောတာပါ။ အဲ အမှန်ပြောတာပါ။ သူကြီးကို ရိုဟင်ဂျာ အယ်ဒီတာလို့ ဂေဇက်က ပိုဒ်တခုမှာ အဲလေ ပို့စ်တခုမှာ သေသေချာချာကို ရေးထားတယ်။ အမှတ်ပြောတာပါ။
ကိုခင်ခနဲ့ ရွာသူရွာသားအားလုံး ကျပ်အနေနဲ့ ပိုဒ်တခုမှာ ဒီအကြောင်းကို ရေးထားတာကို သေခြာဖတ်။ အားလုံးအတွက် အမှတ်ပြောတာပါ။ ဒီအကွတ်တွေဟာ ကျပ်အတွက် မဆန်းပါဘူး။ စာမျက်နှာ ၁ ကတည်းက ရေးလာတာပါ။
ကျုပ်ကို အထင်လွဲနေပြီ မှတ်တယ်
အမယ်လေး မဟုတ်ဘူး။ ကျနော် ကိုပေကို အထင်မလွဲပါဘူး။ အမှတ်ပြောတာပါ။ အဲလေ အမှန်ပြောတာပါ။ သူ့စာလုံးပေါင်းအတိုင်း လိုက်ပြောနေတာပါ။ ဒီမောင် ဘာကြောင်တာလဲ မသိဘူး။ အမှန်တော့ ကိုခင်ခက အေးအေးဆေးဆေး ပြောတာပါ။ သူက ဘာထပြီး ရန်လုပ်တာလဲ မသိဘူး။ ကျပ်ကတော့ အဲလေ ကျုပ်ကတော့ အမှတ်ပြောရရင် သူကြီးကို နောက်မလို့ပါ။ အမှန်တော့ ကိုပေကို ပြောရင်းနဲ့ သူ့စာလုံးပေါင်းတွေကို သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး ထပ်ရေးနေတာပါ။ အခုမှ သတိထားမိတယ်။ ပို့စ်ထဲက စာလုံးပေါင်း တော်တော်များများ မှားနေပါလား။ နည်းနည်းပါးပါး မဟုတ်ဘူး။ ဒီငနဲ စာသေခြာဖတ် အဲလေ သေသေချာချာ မဖတ်ဘူးထင်တယ်။
ကျွန်ရေးသားတဲ့ ပိုဒ်တွေမှာ ကွန်မန့်တွေ နီနေတယ်။ ဒါတွေတွေလိုက်ရချိန်မှာ တိုက်ခံရပြီဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ ကျပ်ကို လူအချိုသာ ထောက်ခံပါတယ်။ လူအချိုးကြောင့် အယ်ဒီတာအား မုန်းတီးနေခြင်း။ ကန့်သတ်ထားသော ပို့စ်များအား အယ်ဒီတာ “ကိုတိုင်ပင်” မလိုက်နာပဲ “ပြနာကြီး” မှ “ပိတ်စို့ချင်း” အစရှသည်များက မကောင်းပါ။ ဒီအကွတ်တွေကို သူကြီးက ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ပြနာကြီးလာမှ ပိတ်စို့ချင်း အစရှသည်များက အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ သူက စာဖတ်အားနည်းနေသေးတယ် ပြောလို့ ကျပ်အနေနဲ့ သေခြာဖတ်ရာက တွေ့လိုက်တဲ့ စာလုံးပေါင်းများပါ။
ပရိသတ်များအတွက် ထပ်မံ တင်ဆက်ပေးတာပါ။ ကိုပေကို လုံးဝ အထင်လွဲခြင်း မရှိပါ။ မလိုအပ်ပဲ ပြနာကြီးလာမှ သူကြီးက ပိတ်စို့ချင်း လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုပေရေ ကျုပ်ပြောတာတွေက တကယ်ပြောတာပါ။ အမှန်တော့ သူ့စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအဆင့်ကို ကြည့်တာနဲ့ စာဖတ်အားကို သိပါတယ်။ သူက ဘောလုံးစကားနဲ့ ပြောရရင် အိမ်ဖြည့်အဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ မလိုအပ်ပဲ ပြနာကြီးလာမှာ စိုးလို့ပါ။ သူကြီးက ပိတ်စို့ချင်း လုပ်လာနိုင်တယ်။
ခင်ဗျားတို့လုပ်တာနဲ့ ဟိုဘက်ကငနဲတွေ အတော်ပျော်နေလောက်ပြီ။
အယ်ဒီတာကို ဘယ်သူမှမဖားပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ဟာကိုကြည့်ပါ ( Points: 6747 Kyats
Rank: Newbie) ၁သိန်းပြည့်မှထုတ်ယူရမှာ။ ကျုပ်က သေတောင်ပြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်သူတွေရခဲ့ဖူးလဲ သိချင်စမ်းပါဘိ။ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာပြောခွင့်ပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးရှိနေပါပြီ။
ဒီရွာထဲက ထွက်မရနှိုင်တာ အဲဒီတစ်ချက်ကြောင့်ပါဘဲ။ဒီမှာရေးနေတဲ့သူတွေအများစုက ဘာမှမျှော်ကိုးနေလို့
မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ကြိုက်တာကို ကိုယ်ရေးနေကြတာပါ။မကြိုက်ရင် မကြိုက်တဲ့အကြောင်းကော်မန့်ရေးပြီးတုံ့ပြန်ပါ။ကြိုက်ရင်လက်မလေးထောင်ပေးလိုက်ပေါ့။အနီတွေ၊အစိမ်းတွေ
တော့ ငါကစိတ်မဝင်စားဘူး။သိပ်စိတ်အချင်ပေါက်လာရင် ဆဲပလိုက်ကွာ။သူကြီးက ဖျက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး
Member တွေထဲ မှာ ၁ သိန်းပြည့်ဖူးပါတဲ့ Member တွေရှိပါတယ်။ .. ထုတ်လဲ ထုတ်ပေးဖူးပါတယ် .. အဲ့ဒီ့ Record တွေလဲရှိပါတယ်။ သိချင်ရင် သိအောင် လုပ်စေချင်ပါကြောင်း …
ခင်ဗျားပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ ကျုပ်ကလည်း စာလုံးပေါင်း မှားတာလောက်ကို ထည့်ပြောဖို့ မစဉ်းစားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီထူးသင်ဆိုတဲ့ ငတိက သူကအရင်စပြီး သူ့ပို့စ်မှာ ကွန်မန့်လာပေးတဲ့ လူတွေကို စရန်လုပ်တယ်လေဗျာ။ သဘောမတူရင် ဘယ်လို သဘောမတူကြောင်း သေသေချာချာ ပြောပေါ့ဗျ။ ပြီးတော့ သူကပဲ စပြီး စာဖတ်အားနည်းသလေး ဘာလေးနဲ့ စပြီးလုပ်သေးတယ်။ အင်း လူကို ခွေးသတ်လေခြင်း ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ။ အဲဒါကြောင့် သူ့ရဲ့တလွဲ ရေးထားတာတွေကို တမင်ကို ထုတ်ပြတာ။ အမှန်တော့ ကျနော်က တခြားပို့စ်တွေကို သဘောမတူရင်တောင် သေသေချာချာကို ဆွေးနွေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူက ပြောလဲ နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူးထင်လို့ အခုလို နည်းနည်းလေး နာနာပြောရတာပါ။
ဒီငနဲက တခြားဘောလုံးဆိုက်ဒ်တွေမှာလဲ ဒီလို သတ်ပုံအမှားတွေ လျှောက်ရေးတယ် ထင်တယ်။ အခုနည်းနည်း သတိထားမိလာပြီ။ သူ့ရဲ့ တခြားပို့စ်တွေ ဖတ်ကြည့်ရမယ်။ စိတ်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
အော် ဒီထူးသင်ကို ပြောတာက personal တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ သူရေးတဲ့ ပို့စ်မှာပါတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောတာဆိုတော့ လုံးဝ လုံးဝ လုံးဝ professional ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေ အတွက်ပါ။ ဥပမာဗျာ ဒီလူက သူတောင်းစားတယောက် ဆိုပါတော့။ အဲဒါကို ကျနော်က သူရေးနေတဲ့ပို့စ်မှာ ဟေ့ကောင် ထူးသင် မင်းဟာ သူတောင်းစားလို့ ပြောရင်တော့ ဒါဟာ personal တိုက်ခိုက်မှုပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့စာရေးနေတုန်း သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဘဝကို ဘာမှမပြောပဲ သူ့စာမှာ မှားတာလေးတွေကို ဝေဖန်တာကတော့ အရမ်း အရမ်း အရမ်းကို professional ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ထင်ရှားအောင် ဥပမာ ပေးတာပါဗျာ။
ကဲ ကိုပေနဲ့ ကိုမိုးတိမ်ရေ လေးစားပါတယ်။ အမှန်တော့ ကျုပ်ပြောနေတာတွေက ခင်ဗျားတို့ကို နာမည်တပ်ပြီး ဒီကလေးကို ဆုံးမနေတာပါ။ ထူးသင်လေးကိုပါ။
ကဲ တခြားရွာသူရွာသား အပေါင်းတို့ရေ စကားမှားတာတွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
ရွာတောင် တော်တော် ပြောင်းလဲနေပြီပဲ
I shoot one time but…..green man ……………..
So later look before you leap.
မခုန်ခင် အရင်ကြည့်ပါ ကလေး။
ကိုစံလှကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဲဒီလိုဒေါသထွက်ပေးတဲ့အတွက် တကယ်လို့များ ကိုစံလှကြီး နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ မချေမငံ မဖြစ်တုံးက ဒီလိုမျိုး (တဖက်သတ်ဆိုတော့ မဟုတ်မမှန် မတရားပြောတာ များဖြစ်နေမလားလို့ပါ။ ဘယ်လိုလူက ဘယ်လိုနေရာမှာ အထောက်အထား မရှိပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ အယ်ဒီတာကြီးကို ပြောဆိုသလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ဥပမာလေးပေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြောသူရဲ့ သတ္တိကလည်း မသေးဘူး ထင်လို့ပါ။) စိတ်ထဲမှာ သရော်သလိုလို လှောင်သလိုလို မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ပြန်တောင်းပန်ဖို့ အသင့်ပါဘဲ စာလုံးပေါင်းမှာတာကတော့ လူတိုင်းပါဘဲဗျာ ကိုယ်မျက်ချီးကိုယ်မြင်ရင်တော့လေးစားစရာပါဗျာ….ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တချို့အရာတွေကို ကိုစံလှကြီး ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ ပြောထားတာ ကျွန်တေ်ာအားနည်းချက်တွေကို သိလာရတဲ့အတွက်ပါ…..ကျေးဇုးပါ ဗျာ….
အမယ်မင်း ပြောရတော့မယ် ဖြစ်ကြောင်းရယ်တဲ့မှကုန်စင် ကို Htoo thin
ခင်ဗျားက ယာဉ်ယာဉ်ကျေးကျေး ခေါ်တဲ့အတွက် ကျုပ်ကလည်း ယာဉ်ယာဉ်ကျေးကျေး ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်ရလေဗျာ။ ခင်ဗျားက ကျုပ်ဒေါသထွက်တယ် ထင်လို့လား။ ဟင့်အင်းပါ။ ဒီမှာစကားစစ်ထိုးတဲ့ နေရာမှာ သူများက ကိုယ့်ကိုလေနဲ့ ပြောတာပဲ။ ကိုယ်ကလည်း လေနဲ့ ပြန်ပြောပေါ့။ ရေးရင်လည်း ပြန်ရေးပေါ့။ ဒေါသထွက်ဖို့ နေနေသာသာ တခါတလေ ကျုပ်ရေးတဲ့ စာတွေ ကျုပ်ပြန်ဖတ်ပြီး ရယ်နေတာ ခင်ဗျားတို့မှ မသိပဲ။ မယုံလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ တခါတလေ ကျုပ်စကားစစ်ထိုးပြီး ထိုင်ရယ်နေတာ တကယ်ပဲ။
ဒါပေမယ့် ပြောရရင် နည်းနည်းတော့ စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်ရဲ့ ကွန်မန့်တွေ စိမ်းပြီး ခင်ဗျားက ကျုပ်ကွန်မန့်ကို best comment ပေးထားလို့ပဲ။ အမှန်က ရဲရဲတွတ် နီနေရမှာ။ အခုတော့ ကြည့်ရတာ ဟာတာတာကြီး။ ကျုပ်အထင် ခင်ဗျားတမင် လုပ်ထားတာနဲ့ တူပါတယ်။ စိတ်သဘောထား မြင့်ပါပေတယ်။ သာဓု သာဓုပါဗျာ။ နှစ်ခါပဲ ခေါ်ပါအုံးမယ်။ နောက်တခါ ခေါ်ဖို့ ချန်ထားအုံးမယ်။ နီအောင် လုပ်ပေးကြပါဗျာ။
တကယ်တော့ ကျုပ်သာဆို ရေရေလည်လည် စကားလုံးတွေသုံးပြီး ထိုးနှက်မှာ။ သိပ်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အမှန်ပြောတာ။ ဟန်ဆောင်တာ ရပ်စမ်း မင်းသိပ်ပင်ပန်းပါတယ် ဆိုသလိုပေါ့။
ဒါပေမယ့် စဖြစ်တာတော့ ခင်ဗျားက စပြောတာဗျ။ ဒါကတော့ ရေရေလည်လည် သေချာတယ်။ အပေါ်က ကွန်မန့်တွေကို ပြန်ကြည့်ပါ။ ခင်ဗျားကြည့်ရတာ ကွန်မန့်က ဘာဆိုလိုတာလဲ ဆိုတာ သိပ်မရှင်းဘူးနဲ့ တူတယ်။ ကိုခင်ခက ဘာမှ မပြောတော့ ကျုပ်ပဲ လူမိုက်ကြီးလုပ်ပြီး ပြောလိုက်အုံးမယ်။ ခင်ဗျားပို့စ်တွေကို နောက်ဆို လာဖြစ်မယ် မထင်လို့ အပြီးပြောခဲ့မယ်။ တကယ်တော့ ကိုခင်ခက ခင်ဗျားကို ကန့်ကွက်တာ ပိတ်ပင်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူက ဟက်ကာတွေအကြောင်း မရေးပါနဲ့ ဆိုတာ ခင်ဗျားကို ဆိုက်ဘာတပ်မတော်က စစ်ခုံရုံးတင်မှာ စိုးတာရယ် နောက်ပြီး ဒီမန်းဂေဇက်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်မှာစိုးလို့ ပြောတာ။ ကျုပ်ကတော့ အမှန်အတိုင်းဆို သူကြီးကို နောက်ချင်လို့ပဲ။ အခုတော့လည်း မနောက်ရက်တော့ပါဘူး။ သူ့ခမျာလည်း ဟိုလူ့ကို တောင်းပန်ရ ဒီလူ့ကို တောင်းပန်ရနဲ့ သနားစရာပါ။ ဒါကြောင့် ဂေးတွေအကြောင်း ရေးတဲ့ပို့စ်မှာတောင် ကျနော်က သူ့ကို recognize လုပ်တယ်လို့ ပြောခဲ့သေးတယ်။
အဲဒီမှာ ခင်ဗျားက စပြီး ဗြူးဗြဲနဲ့လုပ်တော့ ကျုပ်ကလည်း ဟူး ဟဲတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်က ဆိုင်းသမားလိုပဲ တွဲဖက်ရဲ့ ကကွက်အတိုင်း လိုက်တီးပေးတာ။ ဘီလူးဆိုင်း ကြိုက်တဲ့လူအတွက် ဘီလူးဆိုင်းပေါ့။
နောက်ပြီး ကျုပ်ကို ဘာမှမတောင်းပန်နဲ့ဗျ။ ကျုပ်က ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး။ တောင်းပန်မှ ဒေါသထွက်လာတာ။ ကျုပ်လည်း ဘယ်တော့မှ မတောင်းပန်ဘူး။ ကျုပ်က လူယာဉ်ကျေး တယောက်မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျား တောင်းပန်ချင်ရင်တော့ နိုင်ငံကြီးသားတွေနဲ့ပေါင်းဗျ။ ဥပမာ အော်ဇီတို့ ယူအက်စ်တို့ ဘာတို့ပေါ့။ သူတို့ကတော့ တရေးနိုးသော် အကြံပေါ် ပေါ်တဲ့အကြံ တောင်းပန်ရန် ဆိုသလို အားအားရှိ တောင်းပန်ဖို့ စဉ်းစားနေတာ။ လူ့ယာဉ်ကျေးတွေဗျ။ တခါ တခါ ဘာမှန်းမသိပဲ တောင်းပန်ရမယ် ဆိုတာက အရင်ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေပဲ။
အင်း စာလုံးပေါင်းမှားတာကတော့ လူတိုင်းပါပဲ။ တခါတလေ စာရိုက်ပြီး ပြန်မကြည့်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပမာဒလေခလို့ ခေါ်တယ်။ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်ဆို အဲဒီလို ပမာဒလေခတွေ ခဏခဏ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်တိုရီဆိုသူ တယောက်က ကျုပ်ကို ဒေါသကြီးသော ဘုရင်ကြီးတယောက် အကြောင်းဆိုပြီး ရေးခိုင်းသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို အရင်စပြီး ပြောလို့ ကျုပ်ကလည်း ခင်ဗျားကို ပြန်ပြောတာ။ အမှန်တော့ ခင်ဗျားက အရင်စပြောတာ။
နောက်ခင်ဗျား ပြောတဲ့ ဒေါသထွက်ထွက် ဆိုတာကတော့ သိပ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ အမှန်တော့ ကျုပ်ကို ပြောတဲ့လူရဲ့ လေသံအတိုင်း ကျုပ်လက်က အလိုလို သွားနေတာပဲ။ ကျုပ်က လက်ကို သိပ်မထိန်းနိုင်ဘူး။
မတောင်းပန်ဘူး ဆိုပေမယ့် ခင်ဗျားပို့စ်မှာ ခင်ဗျားက အိမ်ရှင်ဖြစ်လို့ ကျုပ်ကပဲ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားနဲ့ ကျုပ်လဲ အငြိအစွန်း မရှိတော့ဘူးပေါ့။ သူတခွန်းပြော ကိုယ်တခွန်းပြောပေါ့ဗျာ။
အမှန်တော့ ကျုပ်ပြောတာက ပိုများသွားပါတယ်။ အဲဒါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်က စိတ်ရဲ့နောက်ကို လက်ကချက်ချင်း လိုက်သွားတတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် သိပ်မခင်တဲ့လူတွေကို ကျုပ်ကွန်မန့် မပေးတတ်တာပါ။ ခင်တဲ့လူကျတော့ သူတို့က ကျုပ်ကို ပြောဖို့ အားနာသလို ကျုပ်ကလည်း သူတို့ကို ပြောဖို့ အားနာပြန်ရော။ အဲဒီတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်စရာ မရှိတော့ဘူးပေါ့။ အော် ကျုပ်ပြောတဲ့ ပမာဒလေခတွေ ကျုပ်ခဏ ခဏဖြစ်တယ် ဆိုတာက နောက်တာဗျ။
အခုလဲ နည်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူများက ကိုယ့်ကို ဆုံးမစာ မရေးခင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမစာတပုဒ်လောက် ရေးရင်ကောင်းမလားလို့တောင် စဉ်းစားကြည့်သေးတယ်။ သိပ်တော့ မထင်ပါဘူး။ ကျုပ်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမလည်း ခဏပဲ။